Shina : Rotaka teo amin’ny mpizahatany sy ny Pôlisy tany Makaô · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2007 15:19 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, English
Nisy rotaka nitranga tamin'ny Pôlisy any Makaô sy ny mpizahatany avy tamin'ny “tanibe” [Shina]. (Tamin'ny fanambarana farany, nolavin'ny mpitondra any Makaô ny fisian'izay rotaka tamin'ny Pôlisy, ambaran-dry zareo fa fanazaran-tena tsy lavitra teo no antom-pisian'ireo Pôlisy tany).
Notaterina fa vondrona ahitana mpizahatany mihoatry ny 100 no nifanolana tamin'ireo tompon-tany mpitarika fizahantany [guide] momba famangiana ny tanànan'i Makaô, araky ny fijoroana vaolombelona nataon'ny mpizahatany nanatrika dia noteren'ireo mpitarika ny handoa famangiana lafo vidy izay tsy ao anatin'ny fandaharana akory ireo mpiazahatany (fidiram-bola miafina hoan'ny mpitarika io). Norahonan'ny mpitarika tsy homeny sakafo sy toerana hatoriana ireto mpizahatany izay mandà. Teraka ny fifamaliana teo amin'ireo mpizahatany vinitra sy ireto mpitarika fizahantany, vetivety monja koa dia tonga ny Pôlisy, ary nandritra ny fifanjevoana ny iray tamin'ireo efatra lohandohany amin'ireo mpizahatany dia voatosika hianjera tamin'ny tany ka torana. Misy mpizahatany sasantsasany izay mitory ny herisetran'ny Pôlisy anefa misy koa tatitra manambara fa nofelahin'ny iray tamin'ireo mpizahatany ny Pôlisy iray. Mihoatry ny 10 ireo Pôlisy manam-pahefana tonga teo vetivety.
Niantomboka tamin'ny fihodidinan'ireto mpizahatany [maro an'isa] ireto Pôlisy tonga teo voalohany, mba hiarovana ny tsy handosirany, ny fifanoheran'ny roa tonta. Taorian'izany dia Pôlisy nirongo fitaovana fanoherana fikomiana miisa 30 no indray nanao rodobe teo. Tsy nitony ny toe-draharaha raha tsy tamin'ny 21:00 ora alina. Mpizahatany efatra no notazonin'ny Pôlisy hanontaniana.
Anti-bavy iray izay mitory ny Polisy amin'ny fikasany ny hanampatra hery amin'ireto vahoaka tanam-polo
Ireo mpizahatany nohodidin'ny mpitandro ny Polisy.
Mpizahatany torana nandritra ny fifanjevoana.
Mpizahatany iray izay nanambara fa hanapariaka izao hadalana manala-baraka izao eran-tany rehefa tody soa aman-tsara any an-tranony.
Sary notsongaina avy tamin'ny www.chinanews.com.cn
Liana te halala ny antsipiriany ? Vakio eto
Ny akon'ny Aterineto
Ny fanarahana ity rohim-baovao tselatra ity dia ampiasana ireo foto-teny trandraka roa “Macao” sy “mainland”, marobe tokoa ireo ako teto amin'ny Aterineto. Ny andiany voalohany dia maneho tsy fankasitrahana sy fahatezerana.
Tao amin'ny 163.com [Shinoa] dia mihoatry ny 500 ireo mpametraka hafatra noho izany raharaha izany. Mipetraka eo izay fihavian'ireo mpametraka hafatra.
Hoy ity mpampiasa Aterineto avy any Guangzhou(广州) iray :
Samy faritanin'i Shina avokoa na i Makaô na i Hông-Kông. Anefa dia tsy maintsy mangataka “alalàna” izahay Shinoa isak'izay mankany. Inona ihany no tena anton'izany ? Andao tsy hisy hamangy any amin'ireo toerana roa ireo intsony.
Izao kosa no navalin'ity iray mipetraka any Amerika :
Mba zefa koa ireo mpitarika mpizahatany any Makaô izany.
Hoy ny iray avy any Hei Longjiang(黑龙江) :
*** [ompa], andao ho tapahina ny jiro sy ny rano dia ho hitantsika eo izay mbola fanambonian-tenan'izy ireo ? Angamba dia voatery hihady sy hihinam-bovoka !
Hoy ny soso-kevitr'ilay iray avy any Shi Jiazhuang(石家庄) :
Ampiharò any amin'ny Hông-Kông sy Makaô ange ny lalàna manan-kery any amin'ny “tanibe” e. Ho hita eo raha mbola avo feo ihany ianareo ?
Tsy ny rehetra anefa no manohana ireto mpizahatany fa misy kosa miezaka ny manazava ny hevitr'ireto mpitarika fizahantany amin'ny mpamaky.
Hoy ilay iray avy any Jin Hua(金华) :
Ha, dia ny mpitarika any Hông-Kông irery ve no hahazo ny karama miafina, aiza no tsy halahelo ireo any Makaô ? Ireo orinasam-pizahantany izay iasany dia [ny mora vidy] antsoina hoe “self-expense shopping group”. 2'000 RMB isan'olona no saran'ny famangiana an'i Hông-Kông sy Makaô. Mba hevero kely ange ! Tsy mahavidy n'inoninona izany, tsy ampy ho saran-dalàna mandroso sy miverina akory aza [raha ny tena izy].
Novalian'ny iray avy any Guangzhou(广州) :
Tsy misy izay sakafo maimaim-poana izany, n'aiza n'aiza eran'izao tontolo izao. Tsidika ho any Makaô amin'izay aman-jatony RMB vitsy monja ? Raha tadiavina hay ny anao !
Ity kosa dia valin-teny avy any Hubei(湖北) :
Rehefa tena aravona, ny olana dia mifahatra mihitsy ao anivon'ny toe-draharaha mipetraka amin'ireo tanàna roa tonta. Izany hoe raha tsorina, tambatambazina amin'izay vidiny mirary ireto mpizahatany, ary avy eo dia asiany amin'ny karama miafina, ka tsy afaka mividy fahatsiarovana akory intsony avy eo.
Tantaran'ny Makaô (Shina) farany
29 Janoary 2019Mediam-bahoaka
28 Febroary 2018Azia Atsinanana
20 Febroary 2018Azia Atsinanana